Corel VideoStudio Pro X4 v14.0.0.342 + Video Tutorials ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Photo and Video Editor Tools » Corel VideoStudio Pro X4 v14.0.0.342 + Video Tutorials
Corel VideoStudio Pro X4 v14.0.0.342 + Video Tutorials
By နေမင်းမောင်11:33 PM12 comments
Corel- VideoStudio- Pro X4 ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Video ပြုလုပ်မှုကို အကောင်းဆုံး ၊ အလျင်မြန်ဆုံးနဲ့ အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အာင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Effects လေးတွေပြုလုပ်ပုံတွေကို အထဲမှာ Video ဖိုင်လေးတွေနဲ့ပြပေး ထားပါတယ်။ အားလုံးပေါင်း Video Tutorial 8 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ သူ့အတွက် Serial key ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းလေးတွေကိုတော့ ကျွန်တော်အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တစ်ဆင့်ခြင်းစီ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး လေးတွေကတော့ HDV, AVCHD, Blu-ray Disc တွေနဲ့ JVC HD camcorders ကင်မရာတွေကနေစပြီး ထည့်သွင်းပေးနိုင်သလို BD-J activation နဲ့ DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-Ray discs တွေကို ပြန်ပြီး ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြုလုပ်နေတဲ့ RevoStock ကနေပြီးတော့ Professional templates လေးတွေကို ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာ Music studio-quality titles, transitions နဲ့ တခြား effects လေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေး နိုင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းပေးမယ့် သီချင်းကိုလည်း မိမိတို့ နှစ်သက်သလို ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ 3D Effects လေးတွေနဲ့လည်း မိမိတို့ နှစ်သက်သလို Box လေးတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊NVIDIA CUDA technology နဲ့ Intel Core i7 အထိကို Support လုပ်ပေးခြင်း၊ Movies တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ထုတ်ပေးထားတဲ့ Video တွေကို YouTube, Vimeo, Facebook နဲ့ Flickr တွေကို တိုက်ရိုက် Upload ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Movies တွေကိုလည်း iPod, iPhone, PSP နဲ့ တခြား mobile devices တွေမှာ Save ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့ Features လေးတွေတော်တော်များများပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ System ပိုင်းတွေအနေနဲ့ Microsoft Windows- 7, Windows Vista- , Windows- XP တွေနဲ့ နောက်ဆုံး latest service packs တွေနဲ့ 32-bit သို့မဟုတ် 64-bit OS တွေကိုပါ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ Processer တွေကို အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Intel- Core- Duo 1.83 GHz, AMD Dual-Core 2.0 GHz လိုအပ်ပါတယ်။ RAM အနေနဲ့ အနိမ့်ဆုံး 1 G လိုအပ်ပါတယ်။ VGA အနေနဲ့ 128 MB အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ Hard drive free space3G ရှိရပါမယ်။ အနိမ့်ဆုံး display resolution က 1024 x 768 ရှိရပါမယ်။ Installation လုပ်ရန်အတွက် DVD-ROM drive ၊ Blu-ray- discs တွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက် Blu-ray- drive တွေနဲ့ Online features တွေနဲ့ Tutorial videos တွေကို ထပ်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ Internet connection လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Installation လုပ်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ မပြောပြတော့ပါဘူး။ သာမာန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပါပဲ။ ကျန်တဲ့ Register လုပ်တဲ့ Key ဖြည့်ပေးရတဲ့ အပိုင်းလေးကိုတော့ ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တစ်ဆင့်ခြင်းစီ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး Installation လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့မှာ Key ရှိနေတဲ့ အတွက် Already Purchased? ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးပါမယ်။
ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Keygen လေးကိုဖွင့်ပြီး Corel VideoStudio Pro X4 v14.0 ဆိုတာလေးကိုအရင်ရွေးပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Serial key လေးကိုယူပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ပုံလေးမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Serial key ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Working Offline ဆိုတဲ့ Tab လေးအောက်က Phone Corel ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီမှာဆိုရင် ပေးထားတဲ့ Installation code ဆိုတာလေးကို ကူးပြီး Keygen လေးမှာရှိတဲ့ Installation code ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ကူးထည့်ပေးပြီးအောက်မှာပြထားတဲ့ Activation ဆိုတာလေးကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ Activation Code လေးကျလာပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ Activation Codeကိုကူးပြီး အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Activation Code ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ပြန်ပြီးကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Serial key လေးထည့်တာပြီးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်အောက်မှာ Notepad လေးနဲ့ လင့်ခ်လေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တစ်မျိုးခြင်းစီကို သူ့တို့မှာပါဝင်တဲ့ Features လေးတွေ လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကအစ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကလည်းနည်းနည်းများတော့ သည်းခံပြီး Download ဆွဲပေးကြပါဗျာ။ ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ ဇာနည် နာမည်နဲ့ တင်ထားတာတော့ကြာပါပြီ။ အခုမှတင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ အောက်ကလင့်ခ်လေးမှာ Google site ကနေတင်ပေးထားပါတယ်။ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Corel VideoStudio Pro X4 v14.0.0.342 + Video Tutorials
မစ်စတာနက် October 29, 2011 at 9:06 AM
ကျနော်မေးစရာလေးရှိလို့ပါ ။ အက်ဒစ်လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ video ဖိုင်ဆိုဒ်က
မူရင်းဖိုင်ဆိုဒ်ထက် အဆ ပေါင်းများစွာ
နေမင်းမောင် October 30, 2011 at 10:47 PM
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုရေ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ အမျိုးအစားအမျိုးရှိပါတယ်. ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကလည်းမတူပါဘူး။ အစ်ကို ဖိုင်ဆိုဒ်သေးတာကိုလိုချင်ရင်တော့ Resolution ကတော့ နိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်. အထဲမှာပါပါတယ်အစ်ကို နည်းနည်းလောက် စမ်းကြည့်ပေးပါအစ်ကို
kyawkyaw November 29, 2011 at 9:07 PM
မိုးလုံးပြာ December 3, 2011 at 5:24 PM
မိုးလုံးပြာ December 3, 2011 at 6:25 PM
ကျးဇူးပါဗျာ။ ဒေါင်းပီသွားပီ အဆင်ပြေတယ် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ ကိုနေမင်းမောင်တယောက်နောက်ထပ်လဲနည်းပညာတွေအများကြီးမျှဝေနိုင်ပါစေ
မိုးလုံးပြာ December 3, 2011 at 8:11 PM
instrall လုပ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ပုံ(၃) Already purchased? ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ်မလာပဲ To Register your product please create your account below ဆိုပီးအကွက်လေးထွက်လာတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲခမျာ။
phone win December 10, 2011 at 12:53 PM
ဂေါလီမောင် January 19, 2012 at 7:11 PM
ဒေါင်းလို့မရဘူး အကိုရေ ကူညီပါဦးနော်
ဂေါလီမောင် January 19, 2012 at 7:20 PM
ဂေါလီမောင် January 19, 2012 at 7:25 PM
yelay January 15, 2013 at 5:00 PM
အောင်မင်းကျော် October 22, 2014 at 8:08 PM